Sirculus. Generaalo Ethiopian ah & Sirdoonka Soomaaliya oo ku shiraya Baydhabo. & Qorsho halis ah oo jira - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Sirculus. Generaalo Ethiopian ah & Sirdoonka Soomaaliya oo ku shiraya Baydhabo. &...
Muqdisho Online oo maalmihii u danbeeysay dabagal ku haysay Dhaqdhaqaaqa Ciidamada Ethiopia ee ku sugan baydhabo ayaa heshay sirculus taaso lagu doonayo in lagu burburiyo Dowlada Goboleedka Jubaland ee hada dhisan lana ladhisaayo maamul gacan ku rimis ah oo taabacsan siyaasada Farmaajo .
Waxaa caawa ku hooyanaya Xarunta ciidamada Ethiopia ku leeyihiin baydhabo labo Generaal oo ka tirsan ciidamada Ethiopia kuwaaso kala ah Taliyaha Ciidanka gobolada bari ee Ethiopia & Taliyaha Hoggaanka Howlgalinta Ciidanka Ethiopia ayagoo safar aan hore loosii shaacin ku yimid Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Sida xogta tibaaxeyso Generaladaas oo aan lahelin magacyadooda waxeey magalada baydhabo kula kulmi rabaan maalinimada bari saraakiil kasocota Sirdoonka Soomaaliya kuwaaso ay hogaaminaya Abdullahi Kulane Jiiz Mareexan & Abdirisaaq mohamoud haaji muhumed oo ah Agaasimaha Waaxda howlaha gaarka ee NISA.
Ajandaha kulanka ayaa ah qorshaha weerarka lagu xureen rabo Dagmada Buale oo caasimad u ah Dowlad Goboleedka Jubaland & dardar galinta howlaha ay iska kaashanayan labada dhinac.
Dowlada Ethiopia oo horay ugu fashilantay isku daygii ay ku dooneysay in aay ku soo xirto Madaxweyne Ahmed Madoobe ayaa dhaleeceen iyo cadaadis adag kala kulantay beesha caalamka taaso kaliftay in uu hakado dagaaladii ay kawaday Gobolka Gado.
Sirdoonka Soomaaliya oo kal hore ciidamo gaar ah tababar ugu qaaday dalka Eritrea ciidankaaso ilaa iyo hada aysan cadeen 4 Talis Ciidan ee Jamhuuriyada Fadaraalka Soomaaliya midka ayka tirsan yihiin.
Sida Qorshaha yahay Sirdoonka Soomaaliya oo gacan ka heleya Ethiopia isla markaasna fulinayo qorshaha siyaasada soo noqoshada Madaxweyne Farmaajo iyo burburinta dowlad goboleedka jubaland ayaa ciidamadii tababarka ugu maqnaa Eritrea loo adeegsan rabaa in lagu fuliyo qabashada Buaale & weerar qorsheysan oo ay ka fuliso Magaalada Kismaayo oo ah xarunta kumeel gaarka caasimada jubaland taaso uu ku shaqeyo Madaxweynaha dooran ee Dowlad Goboleedka Jubaland.
Bishaan Jun dhaxdeeda waxaa Xamar kasoo caga dhigan doona diyaarad sida Ciidamadii Eritrea lagu soo tababaray sida ay dowlada Farmaajo ugu horeyn ciidankaas u isticmaasho ololaheeda doorashada 2020 / 2021 iyagoo shacabka soomaaliyeed ku marin habaabin doona ” waxaan dhisnay ciidamo tayo iyo tiro leh waxaan juhdi galinay in aan mudo gaaban aan kuso tababarno ciidamadaan anagoo kor u qaadnay inaan soo celino Heykalkii ciidankeena oo bari hore africa ka tilmaaman jiray ” .
lkn xaqiiqda ayaa ah in ciidankaas loogu talagay in lagu caburiyo siyaasiinta mucaaradka ee ku sugan Muqdisho sido kale in ciidankaas lagu burburiyo Maamulka Jubaland oo Beesha Caalamka & Dhamaan Saamileeda siyaasadeed ay soo dhaweeyen doorashadii lagu doortay Madaxweyne Ahmed Madoobe halka kaliya Madaxweyne Farmaajo uu kasoo horjoodo Doorashadaas maadama uu rumeeysan yahay inuu Kismaayo kasoo saran Karin inta uu joogo Madaxweyne Ahmed Madoobe xildhibaano Farmaajeesan sidaasi darted wuxuu doonaya Madaxweyne Farmaajo in Jubaland uu geesto Madaxweyne uu asaga wato sida uu kal hore u sameeyay doorashada Koonfur Galbeed & Galmudug.
Sarkaalka Hada kacanta ku haayo howlaha Ciidankaas ayaa lagu magacaba Abdirisaaq Mohamoud Haaji Muhumed kaaso NISA u qaabilsan xil aan hortiisa masuul loomagacaabin oo ah Madaxa Waaxda Howlaha Gaarka , xilkaas ayaa ah mid lagu qabto shaqooyin xasaasi ah oo uu wakiil toos ah ka yahay Agaasimaha Guud ee NISA Fahad Yaasiin. sida aan warar ku helnay Abdirisaaq Mohamoud wuxuu qeyb ka dagaalo sokeeye oo ka dhacay gudaha soomaaliya asagoo ka shaqeynayay isku dirka beelaha fulinta howlaha aadka xasaasiga u ah kaaso uu wakiil uga yahay Agaasime Fahad Yaasiin & Farmaajo.
Xogta soo gaartay Muqdisho Online ayaa ah in Ciidanka Ethiopia doorkooda uu yahay kaliya daabulida ciidanka Farmaajo iyo ineey taakuleen , Talo siin lagarab joogsadaan inta uu socdo howlgalkaas qorsheysan maadama Ethiopian aysan dagaalkaas uga qayb galeeynin si toos ah , sababto ah waxaa isha ku hayaa beesha caalamka oo ugu horeyso Hey’adaha QM u qaabilsan Soomaaliya sida UNSOM.
Diyaarada soo qaadi doonta saraakiisha Sirdoonka Soomaaliya waxaa ku wehlin doona safarka Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo howl shaqo u jooga muqdisho kaaso dhawaan ciidamo tababar ugu soo xiray Muqdisho asagoo ku wehlinaayo Taliyaha Ciidanka Booliska Fadaraalka .
Hadaba Madaxweyne Farmaajo wuxuu wacad ku maray in uu Jubaland geesanayo Maamul asaga udaacad ah si ay ugala shaqeyaan dib u doorashadiisa. Sida uu hada aaminsan yahay in uu heesto awood wayn uuna gacanta ku haayo Galmudug, Hirshabeelle , Koonfur Galbeed & Banaadir.
Suaasha iswaydiinta mudan ayaa ah Qabiilada Soomaaliyeed oday dhaqameedyadooda door dhaxdhaxaad ah ma usoo xulanayaan miyaa xildhibaanada matalayo beelahooda ?
Sida Madaxweyne Farmaajo u aaminsan yahay ayaa ah in oday dhaqameed kasto uu siiyo 200 kun oo dolar si uu usoo saaro xildhibaanada uu doonayo halka tirade guud ee oday dhaqameedyada soomaaliyeed gaarayaan 134 oday , lacagta uu uqorsheyay inuu xildhibanada kusoo saarto ayaa ah 26,8 Milyan oo dolar lacagtaas oo ay bixin doonto Dowlada argagaxisada maalgalise ee Qatar.
Malaga yaaba oday dhaqameedyada ineey danta dalka owgiis aysoo xulaan xildhibaano nadiif ka ah musuq si ay usoo doortay Hogaamiyo badala Madaxweyne Farmaajo oo hada ku eedeysan inuu gacan saar laleeyahay argagaxisada alshabaab , in uu dakadihii dalka usaxiixay Ethiopia iyadoo aysan cadeen faaidada Soomaaliya , inuu kacan bidixeeyay kiiska dacwada bada oo markii 3 dib loodhigay inuu kala diray kooxdii kiiskaas gacanta ku heysay iyadoo aan lasoo bandhigin cadeemo lagu qanci karo arrinta ugu culus ayaa ah in laga qabo tuhun wayn in mararka qaar qorsheyo qaraxyada waweyn ee ka dhaca muqdisho si bulshada looga leexiyo marka ay fashil siyaasadeed kusugan yihiin.
Sida qaraxii lagu dilay Marxuum Gudoomiye Eng Yariisow, kadib markii labaahiyay cod sir ah oo laga duubay safiirka Qatar ee soomaaliya oo sheegaya in qarax ka dhacay dakada boosaso ay fuliyeen saaxiibadooda alshabaab taaso sawaxan iyo jahwareer ka dhalisay gudaha Soomaaliya si mowduucaas looga leexiyo bulshada iyo beesha caalamka waxaa qarax dag dag lagu dilay Gudoomiye Eng Yariisow iyo Madaxdii kale ee ka hoos shaqeyneysay.
Previous articleTaliska Ciidanka Ilaalada Wadooyinka Caasimadda oo Ka Digay Ku Xad Gudubka Sharuucda
Next articleIbraahim Isaaq Yarow – “Muqdisho qabiil gaar malahan ee shacabka Soomaaliyeed aya wada dago””
Warar dheeraad ah oo laga helayo qaraxii saakay ka dhacay Baydhabo
Maxaad ka taqaan goobta uu ka dhacay qaraxii maanta?
Sheekh Shariif “Talo dalku uu doorasho ku aadi karo waa naga diyaar ee dowladda hala fariisato saamileyda siyaasada”
Wararka Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - July 4, 2020
Sida ay sheegayaan warar dheeraad ah oo ka imaanaya magalaada Baydha qarixii saakay ka dhacay magaaladdaas ayaa waxa ka dhashay khasaaraha xoog leh oo...
Wararka Faysal Ali Axmed (Alteeso) - July 4, 2020
Xarunta Ilaalinta Canshuuraha waxa ay kasoo horjeedaa Dekedda Muqdisho, waxaana ku howlgala Ciidamo katirsan Booliiska Soomaaliya oo la tababaray qaadista, dabagalka iyo la socodka...
Sheekh Shariif “Talo dalku uu doorasho ku aadi karo waa naga diyaar ee dowladda...
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlaayay kulan ka dhacay Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay Xaaladda doorashada Soomaaliya. Shariif Waxaa uu sheegay...